hongu kana kwete
Bvunza mubvunzo uye uwane mhinduro: hongu kana kwete
Unowanzotarisira mhinduro yei hongu kana kwete? Unowanzobvunza mibvunzo kakawanda sei? Anenge munhu wose anobvunza mibvunzo mashoma pazuva uye anoda kuwana mhinduro kwavari. Kazhinji, vanhu vanomanikidzwa kuita zvisarudzo. Hungu kana kwete, izvi ndizvo mhinduro huru dzemibvunzo yakawanda. Nzira yekuziva sei mhinduro ipi: hongu kana kwete, ichava yakarurama? Kana usina chokwadi uye usingagoni kuita sarudzo, ndiyo nguva yekushanyira nzvimbo yedu. Uye uwane mhinduro ipi yekusarudza: hongu kana kwete. Panzvimbo ino da-no.ru?lang=sn unogona kubvunza chero mibvunzo inogona kupindurwa hongu, kwete. Nzira yekushandisa sei nzvimbo?
Ingonyorera mubvunzo wako uye tora pane "Bvunza". Pashure pemasekondi mashomanana, mhinduro ichava hongu kana kwete. Zvechokwadi, mhinduro dzinopiwa pasina. Uye iwe haugone kuvimba zvakakwana nenzira iyi. Zvisinei! Mhinduro Yebasa YESO HERE hako kunobatsira kukunda kusagadzikana uye kuita chisarudzo chakanaka. Kana iwe wakagamuchira mhinduro NO, asi waida kuwana mhinduro YES, zvino izvi zvichakupa chivimbo. Kana iwe uchida kuwana mhinduro NO, asi iwe uine YES, zvino mubvunzo wako unokumanikidzira zvakare zvakare kufunga nezvezvinhu uye kutora mhinduro imwechete yakanaka kwauri.
Chero zvazvingava, basa re YES / HUNI kushamisika uye rinobatsira kuita zvisarudzo. Kunyangwe mhinduro dzacho dzichipiwa mukurongeka zvakakwana. Uye ivo vanowanzoipa. Asi iwe chete unoita sarudzo. Nzvimbo "YESU kana HERE" inobatsira kunzwisisa kuti ndeipi sarudzo yekuita: hongu kana kwete.